के कारणले नाकको वरिपरि चिल्लो र स-साना कालो खिल आउछ? यसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ - ramechhapkhabar.com
के कारणले नाकको वरिपरि चिल्लो र स-साना कालो खिल आउछ? यसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ
१:दिनको तीन पटक सफा पानीले मुख धुने । २:बाहिर हिँड्दा वा दिनको एक पटक आफ्नो छालालाई सुहाउने गुणस्तरीय क्रिमको प्रयोग गर्ने । ३:धुवाँ, धुलोबाट आएपछि फेसवासले मुख सफा गर्ने । ४:बढी नै समस्या देखा परे हप्तामा एक चोटी स्क्रप लगाएर सफा गर्ने । ५:सन्तुलित आहारको सेवन गर्ने ।
६:अरुले भनेको भरमा बजारमा पाइने जुन सुकै क्रिमको प्रयोग वा जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने । ७:यदि धेरै समस्या आयो भने चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम आौषधि सेवन वा अन्य तरिका अपनाउनु पर्छ ।